कृषि पढाउन लागिपरेका छौं::Online News Portal from State No. 4
जैमिनी नगरपालिका वडा नं. ५ विनामारेको वडाअध्यक्ष गोपाल पौडेलसंग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
जिल्लाको दक्षिण केन्द्र कुश्मीशेरा बजारसँग जोडिएको वडा हो जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारे । उत्तर फर्केको भूभाग बिनामारेमा प्रसस्त खेतीयोग्य जमिन छ । ठेउले खोलाको किनारदेखी चोखेकको धुरीसम्म फैलिएको यो वडा कृषि उत्पादनका हिसाबले प्रसस्त सम्भावना रहेको छन् । कुश्मीशेरा र बिनामारेको सिमानाहुँदै बग्ने ठेउलेखोलाका कारण बिद्युत, बन जंगल तथा चरिचरन रहेका कारण पशुपालन र अन्य क्षेत्रमा यो वडाका सम्भावनाहरु रहेका छन् । लामो समयको अन्तरालपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले काम थालेको दुई बर्ष समय बितेको छ । जैमिनीकै मुटुमा रहेको यो वडामा बितेका दुई बर्षमा के कस्ता काम भए । परिवर्तन के भयो र के हुन बाँकी छन् । बिनामारेको उन्नती र अवनतीको बिषयमा सहकर्मी योगेशजंग खड्काले वडा अध्यक्ष गोपाल पौडेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
दुई बर्षको समयावधिमा के के काम गर्नुभयो ?
– म पहिला पनि साविकको बिनामारे गाविसको अध्यक्ष थिएँ । नयाँ संरचना बन्यो, गाविस वडामा परिणत भयो । मैले नै वडा अध्यक्ष जितेँ । गाविसको अध्यक्षको रुपमा दुई कार्यकाल आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेकोे छु । वडा अध्यक्षको रुपमा रहेर दुई वर्षको समयावधिमा वडामा धेरै विकास भएका छन् । प्रथम त वाडको विभिन्न टोल–टोलमा रहेको खानेपानीको समस्यालाई ‘एक घर एक धारा’ योजनाबाट समधान गरेका छौं । वडामा रहेको मूलको श्रोतलाई लिफ्टिङ प्रणालीबाट विभिन्न टोलका ट्याङकीसम्म खसाली उपभोक्ताको घर–घरमा पु¥याउने योजनाको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । र, चाँडै नै सम्पन्न हुने छ । यस योजनाले वडामा रहेका खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म समधान हुने छ ।
शिक्षा सुधारको लागि वडामा रहेको एकमात्र माध्यमिक तहको विद्यालय सर्वोदयमा कृषि विज्ञान प्राविधिक शिक्षा पढाउनको लागि प्रक्रियामा अगाडी बढाईसकेको र प्राविधिक शिक्षा पढाई गर्नेको लागि आवश्यक भवन निर्माणको लागि १४ रोपनी जग्गा समेत विद्यालयको नाममा खरिद गरिसकेका छौं । अब छिट्टै कृषि विज्ञान शिक्षाको पढाई हुने छ । वडामा सञ्चालित बालशिक्षाहरुमा निशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ र वडामा सञ्चालित ५ वटा प्राथमिक विद्यालयलाई आवश्यक भवन समेत निर्माण गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माणको लागि स्वाङ संस्थासँग सहकार्य गरी काम पुरा गरिसकेका छौं । यसैगरी, वडामा चाल्ने सडकको सुधारको लागि धेरैजसो शाखा सडकहरु कोरिडोरमा जोडिएका छन् र तिनीहरुको स्तरोन्नतीमा धेरै बजे खर्च गरिसकेका छौं । वडाको सबै भेगलाई समेट्ने मुख्य सडकमा समेत पक्की नालीको निर्माण गरी सुधार गरिएको छ जसबाट बिनामारेका स्थानीय सन्तुष्ट देखिन्छन् । साथै अन्य वडाको सडकभन्दा बिनामारेको सडकहरुको स्तर केही हदसम्म रहेको दाबाका साथ पनि भन्न चाहन्छु ।
हजुरको कामबाट सर्वधारण त निराश जस्तो देखिन्छन् नि ?
– जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अहिलेको मेरा कामबाट निराश भए जस्तो कोही लाग्दैन तर पनि राजनीतिक बिचारका आधारमा आलोचना हुन सक्छन् । सबैलाई समेटेर सबैको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिएको छ । काम गर्दा गर्दै भएका कमी कमजोरी सुधारेर सबैको चित्त बुझाउने प्रयासमा नै हामी छौं ।
वडामा सडक मात्रै प्राथमिकतामा प¥यो, अरु काम भएनन् भन्ने छ नि ?
– हो । प्रथम त सबै वडाहरुको प्रमुख प्राथमिकता भनेकै सडक हुने गर्दछ । तर हाम्रो वडामा सडकको लागि मात्र नभएर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ । गाँउमा कृषिको लागि भनेर साना तथा ठूला गरी ५७ वटा टनेलको निर्माण गरिएको छ । जसको लागि वडाले टनेल निर्माणको लागि आवश्यक सामाग्री समेत वितरण गरेको छ । यसैगरी, महिलाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आर्कषित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्र्तगत वडाका ३० महिलालाई संगठित गरी तालिम, प्रविधि र विउ समेत प्रदान गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि वडामा रहेको रिठेडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेतर्फ योजना अगाडी बढिरहेको छ । रिठेडाँडालाई पर्यकीय गन्तव्य बनाउने क्रममा डाँडाको वरिपरि रहेको जनजाती बास्तीमा होमस्टे संचालन गर्न योजना अनुरुप त्यस ठाँउको सरसफाईको लागि, खाद्यानमा आत्मनिर्भर बनाउन र सुन्तला तथा कागतीको पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि समग्रमा ३ लाख १० हजार बराबरको बजेट छुट्याइएको छ । र, यस योजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसैगरी अन्य विकासका कामलाई पनि भावी योजनामा प्राथमिकताका साथ राखी काम अगाडि बढाईरहेका छौं ।
शिक्षामा सुधार हुन सकेन, सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थीनै छैनन् भन्छन् । कहिले सुधार्नु हुन्छ ?
– अहिले हाम्रो वडामा मात्र नभएर जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । यसको प्रमुख कारण आफ्ना बालबालिकाहरुलाई अंग्रेजी भाषामा अब्बल बनाउने उद्देश्यले निजी विद्यालय खोज्नु, बसाई सरेर टाढा जानु हो । यस प्रकारका समस्यालाई न्यूनिकराण गर्न र वडाको शिक्षा सुधारको लागि भनेर नै कृषि विज्ञान प्राविधिक शिक्षा विद्यालयमा पढाउन खोजिएको हो । जसले वडाको शिक्षा सुधारमा टेवा पु¥याउने छ । लामो समय सामुदायीक विद्यालयमा रहेको समस्या रहन दिँदैनौं ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि के कस्ता कार्यक्रम र योजना बनाउनुभएको छ ?
– आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा एकीकृत सिँचाईको योजना पुरा गर्नतर्फ लागेको छौं । जस अनुरपमा वडाको सिंचाईमा टेवा पु¥याउने हेतुले सिंचाईको लागि नहर बनाउने योजना रहको छ । वडाको पश्चिम क्षेत्रबाट पूर्व क्षेत्रतर्फ गरी ६ किलोमिटर लामो सिंचाईको नहर र उत्तर क्षेत्रबाट दक्षिण क्षेत्रतर्फ हुने गरी ८ किलोमिटोर नहर बनाउने योजना रहेको छ । योजनाको डिपिआर समेत तयार भईसकेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै काम संचालनमा आउने ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसैगरी कालीगण्डकी कोरिडोरको नजिकको फाँटमा धान खेतीको लागि धानको व्लक योजना अगाडि ल्याएका छौं । जसबाट वडामा धान खेती राम्रो हुनेछ । यसैगरी सडक लाई सुधार गरी लग्ने समेत आगामी आर्थिक वर्षमा रहेको छ ।
चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा गर्नुभयो ?
– मैले चुनावको समयमा गरेका प्रतिबद्धताको ३७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जस्तो लाग्छ । प्रतिबद्धता गरेअनुरुप विद्युत वडाको कुना कुना पु¥याएँ, वडामा रहेको काठेपोललाई बिस्थापित गरी फलामे पोलको निर्माण गरे, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्धता थियो र सोही अनुरुप वडाको विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा पढाइने भएको छ । यसैगरी, वडाका स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुती गृह संञ्चालनमा ल्याउने बाचा गरेको थिएँ । अहिले प्रसुती गृह सञ्चालनमा पनि आएको छ । जसबाट वडाका स्थानीय जनता मात्र नभई अन्य वडाका स्थानीय समेत आउने गरेका छन् । यस्तै चुनावमा बाचा गरेका अरु कामहरु पुरा गर्ने अवस्य बाँकी नै छ र ५ वर्ष कार्यकालमा नगर समिती र सरकारी निकायले साथ दियोभने सवै प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नछु ।
– प्रथम त तपाई र तपाईको पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो वडाको विकास र भावी योजनाको विषयलाई लिएर जिज्ञासु भएर संचार माध्यमबाट जनता सामु पु¥याउन समय दिनुभएकोमा । म र मेरा वडा समितीको साथीहरु मिलेर सबैसंग हातेमालो गर्दै दिनरात नभिन जनताको सेवा खटिने छौं र वडाको विकासको लागि जिम्मेवारीपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता गर्दछु